Ka helista Shaqo 3M | Saint Paul Historical
Ka helista Shaqo 3M
“Waxaan doonaya inaan ka shaqeeyo 3M”
Qaar badan oo shaqaalihii hore ee 3M, ay ka mid yihiin William L. McKnight iyo Archibald G. Bush, waxay lahaayeen tababar “ganacsi” ama tababar dugsi sare oo :”fanka makaanikada ah.”
Markii William Viervering la shaqaaleeyay 1916 si uu u hubiyo maamulka tayada, waxa uu lahaa tababar dugsi sare oo kimistariga ah. Waxa uu sii watay si uu uga heloo digriiga kimistariga Jaamacada Minnesota ka dib dagaalkii Addduunka ee I.
Richard Carlton, shaqaalahii 3M ee u horeeyay kaas oo ahaa arday ka qalanjebiyay Jaamacada Minnesota, waxaa la shaqaaleeyay 1921 sidii caawiyaha shaybaadhka. Waxay ahayd fikradiisa inaan ururka wax warshadeeyaa aanu in badan hore u socon karin la’aanta dadka farsamo ahaan tababaran. Waxa uu u dalacay sare si uu u noqdo maamulaha sare ee shirkada, isagoo beddelay McKnight sanadii 1949.
Richard Drew. arday ka dhacay dugsiga injineernimada waxaa la shaqaaleeyay 1921 si uu uga shaqeeyo shaybaadhka cilmi baadhida. Waxa uu sii waday horumarinta xabagta lagu xidho qaybta aan la rinjiyaynayn iyo xabagta khafiifka ah.
Shirkadu waxay ka soo shaqaalaysay dugsiyada sare ee maxaliga ahaa. Waxay bixisay maalmaha Shaqaale-Shaqaale-Waxbarasho iyo Maalmaha Isbarashada si ay u keento macalimiinta iyo la taliyayaasha boos gaynta Warshadda Saint Paul markaas waxay arki karayeen hawl galada iyo xeerarka tooska ah. Macalimiinta ganacsiga iyo fanka warshaduhu waxay ku dhiirgeliyeen si ay ugula taliyaan ardayda shaqooyin gaar ah. Ardayda qaarkood waxaa loo kiraystay shaqada xagaaga iyo mid nus gelin ah oo waxay heleen buundo kooras tababarkooda goobta shaqo ah.
Kulliyadaha iyo jaamacaduhu waxay ahaayeen ilo muhiim ah oo shaqaalaha ah wixii shaybaadhka iyo shaqooyinka farsamada ah. Kooxaha wax shaqaaleeya ee 3M waxay ku sameeyeen booqashooyin caadi ah goobaha waxbarashadda.
Sababtoo ah 3M waxay dhiirgelisa xayaysiiska gudaha ah, sidoo kale waxay bilowday barnaamijka tababarka xirfad barashada gudaha dukaanka mashiinka 1949. Waxay u oggolaatay shaqaalaha barnaamijka si loo gaadho xeerka xirfad yaqaanimo. 3M waxay sii wadaa barnaami tababar oo gudaha ah oo xoogan dhexda shirkada.
High School Students: Many early 3M employees had “business” training or high school training in “mechanic arts.” ~ Source: Minnesota Historical Society
William Viervering: Markii William Viervering la shaqaaleeyay 1916 si uu u hubiyo maamulka tayada, waxa uu lahaa tababar dugsi sare oo kimistariga ah. Waxa uu sii watay si uu uga heloo digriiga kimistariga Jaamacada Minnesota ka dib dagaalkii Addduunka ee I. ~ Source: Minnesota Historical Society
Richard Carlton: Richard Carlton, shaqaalahii 3M ee u horeeyay kaas oo ahaa arday ka qalanjebiyay Jaamacada Minnesota, waxaa la shaqaaleeyay 1921 sidii caawiyaha shaybaadhka. Waxa uu u dalacay sare si uu u noqdo maamulaha sare ee shirkada, isagoo beddelay McKnight sanadii 1949. ~ Source: Minnesota Historical Society
Richard Drew: Richard Drew. arday ka dhacay dugsiga injineernimada waxaa la shaqaaleeyay 1921 si uu uga shaqeeyo shaybaadhka cilmi baadhida. Waxa uu sii waday horumarinta xabagta lagu xidho qaybta aan la rinjiyaynayn iyo xabagta khafiifka ah. ~ Source: Minnesota Historical Society
Xayaysiiska xirfadaha fursada shaqo ee sanadka buuga ka soo baxay Dugsiga Sare ee Harding ee Saint Paul. ~ Source: Minnesota Historical Society
Dugsiga Sare ee Harding ~ Source: Minnesota Historical Society
Campus Recruitment: Colleges and universities were important sources of employees for laboratory and technical jobs. 3M recruiting teams made regular visits to campuses. ~ Source: Minnesota Historical Society
Apprenticeship Training : Arthur Rivard, foormaanka korantada,bidix, waxa eegaya Orville Meyers,nashqadeeyaha korontada, badhtanka, waxa tilmaamaya Alvin Seifert, qaataha tababarka xirfada korontada, isticmaalka qaybtan qalabka korontada ah, hal weji oo tababarkiisa xirfada shaqo ah. ~ Source: Minnesota Historical Society
Shaqaalaha mashiinka Isku dhejinta George Johnson waxa uu ahaa arday ka soo qalan jebiyay Xarunta Tababarka Warshada. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Ka helista Shaqo 3M
,” Saint Paul Historical, accessed December 18, 2018, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/393.